कांग्रेस निर्वाचनमा देखिएका पाँच रोचक दृश्य | MYAGDINEPAL
Home / राष्ट्रिय समाचार / कांग्रेस निर्वाचनमा देखिएका पाँच रोचक दृश्य
कांग्रेस निर्वाचनमा देखिएका पाँच रोचक दृश्य
नेपाली कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि अहिले मतदान भइरहेको छ । प्रदर्शनीमार्गस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा मतदान जारी छ भने भृकुटीमण्डपमा भोट माग्नेदेखि नाराबाजी गर्नेसम्म छन् । भोट माग्ने कार्यमा उम्मेदवारहरु भन्दा पनि उनका समर्थकहरु बढी छन् । मतदानस्थल पुग्दा यी पाँचवटा रोचक दृश्य देखिए ।
१. भडि्कलो प्रचारमा होडबाजी
कांग्रेसको चुनाव पार्टीको आन्तरिक हो । तर, उम्मेदवारहरुको प्रचार प्रसार हेर्दा संविधानसभा वा कुनै संसदीय चुनावलाई जित्ने खालको छ । भृकुटीमण्डप भित्र र बाहिर पर्चा पम्प्लेट टाँगिएको तथा छरिएको छ । मतदातालाई बाँडिएको पर्चाले सडक पुरै ढाकिएको छ ।
२. देउवा आक्रमक, सिटौलाको उपस्थिति नै देखिएन
भृकुटीमण्डपको गेटमा काँडेतार लगाएर मतदाता, उम्मेदवार र प्रेस-पास भएका पत्रकार तथा प्रतिनिधिलाई मात्र प्रवेश दिइएको छ । त्यो घेराभन्दा बाहिर समर्थकले भोट मागिरहेका छन् ।
यसमा सभापतिका उम्मेदवार शेरबहादुर देउवा पक्ष निकै आक्रमक देखिएका छन् । मतदानका लागि जाने मतदाताहरु प्रवेश गर्ने स्थानमा उनका समर्थकहरु बसेका छन् र भन्छन्, ‘जित्ने एक मात्र उम्मेदवार शेरबहादुर देउवा, तपाईको मतले बहुमत पुग्छ ।’
अर्कोतर्फ रामचन्द्र पौडेलका समर्थकहरु छन् । उनी पनि भोट त माग्छन् । तर, देउवाका समर्थकहरुका अगाडि उनीहरुको आवाज नै सुन्न गाह्रो पर्छ । उनीहरु रामचन्द्र पौडेललाई एक भोट भन्छन् । त्यही अन्य केही उम्मेदवारका समर्थक पनि भोट मागिरहेका हुन्छन् ।
भृकुटीमण्डप परिसरमा पनि देउवाका समर्थकहरु नै नाराबाजी र गीत गाइरहेका भेटिन्छन् ।
३. ‘म्यान स्ट्याण्ड’ होडिङ बोर्ड
अधिकांश उम्मेदवारले पर्चा बनाएका छन् । तर, केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार केवलकुमार लामाले भने फरक शैली अपनाएका छन् । उनको भोट माग्न म्यान स्ट्याण्ड होडिङ बोर्ड प्रयोग गरिएको छ । उनको नाम, तस्वीरसहितको होडिङ बोर्ड बोकेर केही युवाहरु बसिरहेका छन् । उनीहरु मध्येका एक हुन विकास लामा ।
उनी विहान ६ बजेदेखि नै प्रचारमा जुटेका छन् र उनीहरुको ४०/५० जनाको समूह छ । उनीहरु पालैपालो लामाको प्रचार गरिएको होडिङ बोर्डर् बोकेर बस्छन् ।
लामाले पानीको बोटलमा पनि आफ्नो नाम लेखेर वितरण गरेको भेटिएको छ ।
४. उम्मेदवार पहिचानमा संकट
६१ केन्द्रीय सदस्यका लागि ३ सय २ जना चुनावी मैदानमा छन् । खुलासहित विभिन्न आरक्षण सीट छ । तर, उम्मेदवारहरु धेरै भएकाले पहिचानकै समस्या देखिएको छ ।
मतपत्रमा तस्वीर राख्ने व्यवस्था छैन । नाम मात्र छ । त्यसैले उम्मेदवारहरुले आफ्नो प्रचारमा नामसँगै मत पत्रमा रहेको क्रमसंख्यालाई पनिसँगै र ठूलो अक्षरमा लेखेका छन् ।
फ्लेक्सहरु छाप्नेहरुले सुरुमा क्रमसंख्या लेख्न पाएका थिएनन्, किनकी मतपत्रमा रहेको सूची आज विहान मतदान सुरु हुनु अघि मात्र आएको थियो । तर, उम्मेदवारहरुले मार्कर प्रयोग गरेर भए पनि आफ्नो क्रमसंख्या लेखेका छन् र भोट माग्नेहरु पनि नामसँग क्रमसंख्या भन्न छुटाउँदैनन् ।
५. कति लिटर भोट आयो ?
अर्को रोचक पक्ष मतपेटिका रहृयो । कांग्रेसले मतदानका लागि पानीको ड्रमलाई मतपेटिकाका रुपमा प्रयोग गरेको छ । ड्रमको विर्कोमा मतपत्र खसाल्न मिल्ने गरी काटिएको छ र विर्को लगाएर सेतो टेप टाँसेर सिल गरिएको छ ।
त्यसैले अब मतदान सकिएपछि कति मत खसेछ होइन कि कति लिटर मत खसेछ भनेर पो सोध्ने हो कि ?